KALA DUWAN EE ISTEROBERI AUGUST: DHIRTA, DHIRTA IYO DARYEELKA BEERTA - KU'SAABSAN
Maanta, tiro badan oo kala duwan oo isteroberi ah ayaa la dhigay bred, meel sharaf leh taas oo ay ku qabsadeen dhoobada August. Waxay ku dhacday jacayl leh bannaanka u for unpretentiousness iyo goosashada deeqsi ah. Maxaa kale oo ah muusiko macaan ee Augustus dhirta, iyo sidoo kale waxa sharaxaadiisa iyo shuruudaha aasaasiga ah ee daryeelka, waxaan hoos ku qeexnaa.
Pear Avgustovskaya dhoobo: sharaxaada kala duwan
Agoosto Agoosto ayaa la soo raray sanadkii 2002 iyada oo la soo gooyay Tenderness iyo Triumph Pakgam noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'P. Yakovlev'.
Kala duwanaanshahan ayaa iska leh hoos-u-dhaca (dhererka ugu sarreeya - 3 mitir), laakiin dalagyada sii kordhaya. Waa geed dhexdhexaad ah waxayna u baahan tahay deris-dejinta deriska.
Ma taqaanaa? Agoosto Agoosto waxay ka soo qaadatay waalidiinteeda oo keliya qaababka wanaagsan: laga bilaabo Dhiigga - iska caabin xagga barafka iyo cudur, laga bilaabo Triumph Pakgam - wax-soosaarka sare iyo dhadhankiisa.
Taaj of pear this waa mid dhumuc dhexe dhexdhexaad ah, wax yar ka fuqsan. Miraha waa dhexdhexaad ah (100-150 g), pear-qaabeysan, oo aan lahayn feeraha. Inta lagu jiro Bisaylkiisa, midabka miraha isbedelka cagaaran ilaa cagaaran. Kiimikada bisil waxay yeelan kartaa cadho iyo dhibco badan oo subcutanous ah. Maqaarku waa u siman yahay taabashada, inkastoo ay u muuqato mid xanaaq badan. Jidhku waa caddaan yahay, midab leh.
Caannimada bisha Agoosto ayaa sidoo kale la xiriirta sifooyinka dhadhanka - dhadhanka, dhadhanka macaan, dhadhanka jilicsan, casiir leh iyo boodh biya ah.
Waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho shaxankan labadaba labadaba labadaba caanaha iyo warshadaha (saxaraha, kaydka, macaanka, miro la qalajiyey, waxsoosaarka, iwm.). Pear-ka Kuwani waa faa'iido ma aha oo kaliya dadka waaweyn, laakiin sidoo kale carruurta - miraha ma keenaan raaxo la'aan, xasaasiyadaha iyo saameyn ku leh jirka oo dhan, kor u qaadida difaac.
Ma taqaanaa? Pear waxaa si firfircoon loo adeegsadaa daawada dhaqameed (oo leh qandho, qufac, cuduro dhagxaan, caabuqa nidaamka urojinimada, si loo xoojiyo darbiyada xididdada dhiigga, hayso nidaamka wadnaha, fangaska, dermatitis).
Beer-caleenta lo'da Agoosto
Sida horay loo xusay, pear Augustus dharabku waa unpretantious iyo koraa si degdeg ah, laakiin tani waxay ku xiran tahay beeritaanka habboon iyo daryeel habboon.
Si wanaagsan loo doortay seedling - fure u ah dhalidda sare ee mustaqbalka. Si aad u doorato geedkii saxda ahaa ee beerto, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka soo socda:
Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto geedo keli ah oo keliya xanaanada.
Caleemaha geedka waa inay noqdaan kuwo cusub, kiis kasta, aan qalalan oo aan barafaysan. Mudada dheer ee lafdhabarka iyo nidaamka xididka ayaa la horumariyaa, si ka fiican ayuu jeermiska u qaadan doonaa xididka.
Xididkii gooyaa waa inuu caddaan yahay. Haddii midabku ka duwan yahay, waxay tilmaami kartaa in seedling uu barafoobay ama la qalajiyey.
Xididku waa inuusan lahayn wax xannibaad ah - taasi waxay muujinaysaa jiritaanka cudurada.
Goobta seedling waa inay ahaato mid aan caadi ahayn oo aan waxyeello lahayn.
Waa muhiim! Wixii beerto waxa ugu wanaagsan in la doorto geedo hal-laba sano ah oo leh xidid xoog leh oo xididdada ka soo baxa.
Doorashada meel ka yar pear
In kasta oo xaqiiqda ah in dhoobo August ayaa ah noocyo kala duwan oo aan qabyo ahayn, geedo waxay si fiican u qaadaan xaalado wanaagsan - gobollada bartamaha iyo koonfurta, oo ay ku badan yihiin ciidda madow.
Kala duwan noocyadaas waxay jecel yahiin in laga ilaaliyo dabaysha, meelo badan oo qorrax leh. Badbaadinta liidata iyo miraha biyaha ku jira, meelaha hoose ee jiifka ah.
Xerada waxaa lagu beeray dhinaca galbeed ama koonfur galbeed. Carrabka ugu fiican waa loamy ama bac.
Ka hor inta beerto, goobta waxay u baahan tahay in la qodo oo lagu quudiyo ciidda (superphosphate, compost, Bacriminta potash). Isla mar ahaantaana waa lagama maarmaan in la hubiyo in xididdada ee seedling ma la taabasho leh Bacriminta.
Pear Avgustovskaya dheeh ayaa iska leh noocyo is-bacrin ah, si kastaba ha ahaatee, heerka is-pollination ma aha mid sare, sidaas darteed, si loo kordhiyo dhalidda, waxaa lagu talinayaa in ay ku beeri pollinators dhow.
Goorta iyo sida loo beero dhoobada August
Waqtiga ugu wanaagsan ee beerto waa dayrta (horraanta bisha Oktoobar). Dad badan ayaa ku talin doona in la beero guga, dhammaadka Abriil. Bannaanka u sameeyaan waxaa jira tignoolaji gaar ah oo isteroberi ah, kaas oo ay ku talinayaan in ay raacaan:
qodo dalool (0.5 m qoto dheer iyo 1 mitir dhexroor) oo kabixi carrada dhexdeeda;
on the sapling waxaad u baahan tahay in la jeexo caleemaha, tegaayo oo kaliya on laanta kasta;
haddii geedka la iibsaday oo la beeray guga, waxaad isla markiiba ku fidi kartaa laamaha (ma jiro kiisku ma aha xididada - inta badan waxaa jira, dhakhso ah pear wuxuu qaadan doonaa xidid);
30 cm qoto dheer, meel taakuleeg ah u abuur;
dhig seedling ee godka, toosi xididada iyo saydhaa oo dhulka leh (qoorta xididka waa in yar oo ka sareeya dusha sare);
Isku mashquulaan dhulka iyo aamuska leh caleenta ama xayawaanka;
ilaali masaafada masaafada u dhaxeysa geedo (ugu yaraan 2 m).
Daryeelka noocyo ku'saabsan Avgustovskaya dheeha
Ka dib markii sapling waa la beeray iyo beeray, siriyuhu August bilaabmaa.
Ka hor inta aadan waraabin, dhammaan cawska waa in la baabi'iyaa, iyo dhulka ku wareegsan way furmeen.
Sanadaha ugu horreeya iyo sanadaha dambe ee nolosha geedka, waa in biyaha la waraabiyaa wax ka badan shan goor bishiiba xagaaga (waxaad dalban kartaa waraabinta biyo). Jaangooyo - 1 baaldi oo ka hooseysa geed kasta.
Nidaamka waraabinta waa in uu noqdaa mid gaabis ah, sidaa darteed biyaha ayaa ku rusheyn kara ciidda iyo biyaha xididada. Haddii xagaaga qallalan, ka dibna biyo ka sii fiican subaxda iyo fiidka barket kala badh hal mar.
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, waraabinta waa la yareyn karaa ama waa la joojin karaa. Guga, waraabinta waa inuu si tartiib tartiib ah u bilaabaa.
Waa muhiim! Miisaanka biyaha ayaa loo baahan yahay in la hagaajiyo iyadoo ku xiran xilliga xaddiga iyo tirada roobabka.
Bacriminta iyo quudinta pear
Agoosto Agoosto wuxuu jecel yahay Bacriminta dabiici ah oo ay ku jiraan dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah (digada).
Waxaa ugu wanaagsan in la quudiyo guga kasta (sida caadiga ah, bisha Maarso-Abriil) - 1-2 kg oo ah digada halkii mitir oo labajibbaaran ee geedka. Inta lagu jiro pear ubax karaa bacriminta leh 0.1% xal of boric acid (10 g - 10 g of daroogada).
Xilliga dayrta, Bacriminta nitrogen (amooniyam, HOL) ama digada ayaa lagu dabaqayaa. Tan waxaa la sameeyaa ka dib markii caleen dhacdo.
Xilliga dayrta, si looga ilaaliyo qoraxda iyo cayayaanka, waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo qoryaha leh maadada cagaarka ama rinjiga gaarka ah ee geedaha. Ka hor inta jiilaalka, aagga-geedka aagga waxaa laga nadiifiyey caleenta, oo la waraabiyo (70-100 l), dhulka ku dhow xididada waa mulched leh sida balka (dhumucdiisuna dhererka - 15 cm).
Dhamaan noocyada kala duwan ee pear manjooyin Avgustovskaya dheen
Manjooyin karti leh ayaa u oggolaanaya ma aha oo keliya in la sameeyo taajkii geedo qaangaar ah, laakiin sidoo kale xakameynaya dhalidda, xajmiga miro iyo xitaa xakameynaya cudurrada.
Geedo budo ah
Marka laga beerto geed yar, waxaa la jarayaa 1/3. Sidaas pear si dhaqso ah u bilaabi doonaa si ay u sameeyaan taajkii. Goobta lafteeda lafteeda ayaa laga nadiifiyaa laanta hoose ee hoose.
Sannadka soo socda, koodhiinka ayaa la jarjarey 25 cm, iyo laamood qalfoof - 5-7 cm. Xaaladdan oo kale, laamaha sare ee sare waa inay ka gaaban yihiin kuwa hoose.
Manjooyin qaangaar ah
Gooyo geed geedo qaangaar ah waa in la sameeyaa guga kasta, illaa iyo socodka dheecaanku bilaabo (badanaa bisha March). Ha ku talin pear manjooyin xilliga dayrta. Haddii laanta gebi ahaanba la gooyo, waxaad u baahan tahay inaad ku sameysid saldhigga, si aysan ugu dhicin.
Gogol la mid ah laan koraya oo si dhow u koraya, dhajiyay gaar ahaan dheer, sidaas darteed raadinaya si ay u gaaraan dherer isku mid ah ee tier. Meelaha la jarjaray oo la jarjaray beerta beerta ama dhuxul la jajabiyey.
Haddii ay laamuhu ay hoos u dhacaan (ama xitaa ku dhacaan) dhulka, waa in la gooyaa. Of caleemaha yar yar ka tago kan ugu xoogga badan, kuwa ugu nugul ee la gooyey. Xataa haddii ay jiraan xoog badan iyo xitaa caleemaha, ha ka tagin oo dhan. Caleemaha dhalinyarada waa in aysan aheyn wax ka badan ¼ oo ah wadarta guud ee taajka.
Waa muhiim! Inta lagu jiro xilliga manjadu ma isticmaali kartid dheecaanka nitrogen - waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa qaybaha ay bogsanayaan.
Xilliga dayrta (laga bilaabo dhamaadka Agoosto ilaa bilowgii Oktoobar), waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro laamaha jiran iyo jaban ee gubanaya ka dib. Caleemaha yar yar ayaa la soo gaabiyaa 1/3, halka ay ka tegayaan dhawr burooyinkood.
Nidaamyada noocyada taranta ee isteroberi August
Isteroberi ayaa lagu faafin karaa jarida, qashinka, habka abuurka (generative) ama isugeyn. Daabacaadda abuurka waxaa inta badan loo adeegsadaa jilciyeyaasha loogu talagalay taranta noocyo cusub, Beelaha, for kaydka duurjoogta ah iyo beeraha.
Habka ugu fudud, kaas oo ku dhex jira dadka deggan, waa soo saarida adoo ku dhajinaya. Oo waxay bilaabeen inay midho dhala'aan ka hor.
Gooyn ah ee loo goostay xilliga qaboobaha. Tani, laan qaanad ah ayaa la qaadaa (ugu yaraan 2 sano jir) oo dillaacey. Xaaladdan oo kale, qoyaanka waa in aan la dillaacin. Dhererka ugu wanaagsan ee gooyntu waa 15-20 cm Meelaha jabka, oo aan toosin, u leexanayo filim farsamo, cajalad ama cajalado, waxay ku xiran yihiin taageerada iyo go'an.
Xilliga gu'ga ee dhulka ayaa jebiya walxaha xoogga leh si ay u xirtaan unugyada. Bisha Abriil, waxaa laga saarayaa xajiyaha, laanta meelaha lagu jaro ayaa gooyaa gooynta.
In weel laba-litir ah (inta badan dhalo caag ah oo mug leh oo qoorta la gooyey loo isticmaalo), biyaha waxaa lagu shubaa dhererka 5-7 cm, 2 kiniin oo dhuxul firfircoon ayaa lagu daraa, gooynna waxaa lagu dhejiyaa qaybo hoose. Tara ku rido daaqadaha (qorraxdu waa inay ahaataa mid badan). Ka dib 20-30 cisho gumeysiga callus wuxuu ka muuqan doonaa qaybaha hoose, iyo xididdada ayaa bilaabi doona inay koraan.
Sida ugu dhakhsaha badan dhererka xididada 5-7 cm, waxay ku beeran karaan dhulka furan, ilaalinta markii ugu horeysay ee iftiin dhalaalaya. Haddii guntooda si joogto ah u waraabiyo, quudiyo iyo weeded, ka dibna by dayrta waxay u ekaan doonaan geedo wanaagsan.
Habka loo foorarsado laamihii dhulka (sida loo sameeyo geedo) ma aha mid ku haboon isteroberi. Sidaa darteed, qaab kale ayaa loo isticmaalaa: Qaybta lakabka waxaa lagu bedelaa sanduuq buuxa dhulka. Darbiyada sanduuqa ayaa horay loogu daboolay filim (si loo yareeyo uumiga qoyaanka). Laanqoolku wuxuu ku dheggan yahay sanduuqa, iyo jarista ayaa la sameeyaa marka ay taabato ciidda ku taal jilif. Taas ka dib, laanta ayaa la jiido oo dhulka hoos u dhacda.
Sidaa daraadeed geeddi-socodka xididku wuxuu si xooggan u socdaa, ka hor inta aan la qaadin, lakabka waxaa lagu quudin karaa xal gaar ah ama budada. Ka dib markaa, dhulka waxaa lagu daboolay filim (qalab saqaf ah) oo la rusheeyey lakabka birta compost. Dhulka sanduuqa waa inuu ahaadaa wax yar oo qoyan waqtiga oo dhan.
Kufsigu wuxuu soconayaa ilaa dhamaadka xilli-ciyaareedka. Si kastaba ha ahaatee, marka xididdada la aasaasay, waxay weli yihiin daciif ah, iyo dharabkii Agoosto waa in aan la transplanted ee pears sanadka ugu horeeya. Iska ilaali laanta jiilaalka (waa la qaabeyn karaa) oo daboolo sanduuqa leh baraf duufaan. Ereyga ah ee beerista qallajinta wuxuu soconayaa celcelis ahaan 2 sano, ka dibna waxaa lagu beerin karaa ciidda sida seedling caadi ah.
Ma taqaanaa? Lakabyada waxay bilaabaan inay ubaxaan oo ay midho u dhalaan ka hor geedo.
Midhaha ugu horreysa ee fasalka koowaad ee pear waxaa la soo ururin karaa horaantii sannadka 3-4aad ka dib markaad degto. Waxay u bislaadaan badhtamaha bisha Agoosto (taas oo ku xidhan xaaladaha cimilada) iyo bil gudaheed oo si adag loo qabsado laanta.
Heerka wax-soo-saarku aad ayuu u sarreeyaa, sanadaha horena, macmacaanka Agoosto wuxuu soo saari karaa 10-15 kg miro geed. Oo markaad geedkii weynayso, waxaa kor loo bixiyaa hadhuudhka.
Dabiiciga ah ee jaalaha ah Avgustovskaya dheeha ayaa bixiya agagaarka pollinators, taas oo, marka lagu daro Xasuusta Yakovlev, noocyada kale ee iskiis u leh ayaa loo saari karaa, taas oo la jaanqaado wakhtigii ubax, midho, iwm.
Isu ururinta cimilada qallalan iyo kaydinta si fiican u isticmaal sanduuqyo alwaax ah ama weel balaastig ah.
Muuqaalka ganacsiga ee xaaladaha caadiga ah ee kaydinta (maqaasiinka) pear waxay haysaa ilaa 14 maalmood. Pear waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha 3 bilood iyada oo aan lumin tayadiisa.
Waa muhiim! Iyada oo leh tiro adag oo ah walxo waxtar leh pear ku keeni kartaa waxyeello: laguma talinayo in la isticmaalo qanjirada, boogaha, colitis. Miraha qunyar-socodka ahi sidoo kale waa halis.
Pear Avgustovskaya dheeha: Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kala duwan
Pear Avgustovskaya dheeh ayaa leh faa'iidooyin badan, iyo sharaxaadda noocyo kala duwan oo aan dhammeystirnayn, haddii aanad xusuusnayn faa'iidooyinka:
dhalidda sare iyo mid deggan (illaa 200 kg / ha);
caabbinta fangaska (gaar ahaan qolof);
taajka iswada leh (wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku korodho meelaha yar yar);
aan qabyo ahayn iyo sahlanaanta sii kordhaysa;
dulqaad wanaagsan oo abaar ah;
bandhig fiican iyo dhadhan fiican.
Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah inta jeer ee cunnaanta iyo kala-soocida miraha oo leh wax-soo-saarka baaxada leh.
Heerkan aad u fiican ee pear waa sidaas aan qabyo ahayn oo sahlan ee ka tagaya taas oo u ogolaan doonta ninkii beerta ka shaqaynayay inuu ku raaxaysto miraha udgoon ee beerta leh wax yar oo dadaal ah.